Zaza vao teraka dia efa an 'taloha' | Apg29
Surfar nu: 918
Aftonbladet manoratra hoe :
New York City, any Etazonia dia nampiditra ny lahy sy ny vavy ara-dalàna fahatelo. Antsoina hoe "X" sy ny taona ny olona tao an-tanàna, izay mamantatra ny tenany toy ny na lehilahy na vehivavy dia afaka manova izao ny lahy sy ny vavy. Izany dia atao amin'ny alalan'ny famenoana amin'ny endrika sy Antitrantero fa ny fiovana dia atao ny "maneho ny tena maha-lahy sy ny vavy", hoy i USA Today.
"Ho 'transsexuelle rehetra sy ny tsy mimari-droa ao amin'ny New York: izahay mahita anao, hihaino anao sy hanaja anao. Avy 2019, rehetra mponin'i New York mba hanova ny lahy sy ny vavy eo amin'ny kopia nahaterahana ny M, F na X - tsy misy taratasy fanamarinana ny fitsaboana ", hoy ny ben'ny tanàna Bill de Blasio ao amin'ny Twitter. M dia "ny olona," F ny "vehivavy" (vehivavy) ary X no vaovao tsy miandany, firaisana ara-nofo.
Midika ve izany fa izy ireo dia afaka hanova ny saina ho azy indray andro, ny vehivavy hafa sy ny "X" ny fahatelo, arakaraka ny fihetseham-pony isan'andro isan'andro? Very hevitra izao tontolo izao!
Tena miala tsiny ho an'ny olona izay dia efa babo noho ny fihetseham-pony.
Legal firaisana ara-nofo
Aho ny fotoana fohy lasa izay ao anatin'ny ratsit.se izay afaka mitady olona. Tsy misy "firaisana ara-nofo" raha toa ka lahy na vavy, fa "lahy sy ny vavy ara-dalàna". Izy ireo, amin'ny teny hafa, miova hevitra.
Izany dia midika ihany koa fa rehefa ny "ara-dalàna lahy sy ny vavy", ary "firaisana ara-nofo" dia tsy zavatra iray ihany. "Miralenta" dia zavatra ianao teraka sy ny "ara-dalàna lahy sy ny vavy" dia zavatra hitanao eo izay tsy ifandraisany amin'ny tena zava-misy.
Alohan'ny androany, dia nanoratra momba ny mahantra 26 taona Loui Sand vehivavy izay mihevitra izy dia teraka miaraka amin'ny lahy sy ny vavy ny diso. Vakio ilay lahatsoratra: Raha ianao no teraka tao amin'ny vatana tsy mety, azonao atao ny ho teraka indray .
Mangataha ary handresy
Mila samy hivavaka ho an'ny olona sy handresy azy ireo ho an'i Jesosy. Izy no hany famonjena sy ny famonjena. An'i Jesoa Kristy, mandamina ny fiainantsika isika ary hahazo ny maha-marina.
Ny mahatahotra dia raha misy diso foisted firaisana ara-nofo amin'ny zaza tsy manan-tsiny. Ray aman-dreny ao amin'ny New York koa nametraka ny "X" eo amin'ny zaza vao teraka. Ahoana no mahatsiravina! Ny ankizy dia manomboka ny fiainany ny maha "taloha"!
Mivavaha ho an'ny zanatsika sy hanome azy ireo Jesosy, ka dia mba hisambotra Azy. Avy eo dia tsy ho 'taloha', fa dia hitombo ho azo antoka ny olona mirindra tsara.
Vecka 25, måndag 17 juni 2019 kl. 00:47